လ၏ App များ: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016 - သတင်း Rule
လ၏ App များ: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016
အဆိုပါ Observer ရဲ့ app များကိုဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြု 10 apps များနှင့် 10 မိုဘိုင်းဂိမ်းကသူဒီလရှာဖွေတွေ့ရှိင်, Lonely Planet ကနေသင်သတင်းစာကို run ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ဂိမ်းမှအော့ဖ်လိုင်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်လမ်းညွှန်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “လတစ်လရဲ့ App များ: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္လာနေ့ 15 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ် Observer များအတွက် 2016 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Lonely Planet ကလမ်းပြ
Android / iOS ကို
Lonely Planet ကနေခရီးသွားတွေများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် app ကို, နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် - ဤကောင်းတစ်ဦးမ! - အသေးငယ်တဲ့ screen ကိုမှ၎င်း၏စာအုပ်တွေထဲကနေမြို့လမ်းပြအချို့ကိုလွှဲပြောင်း၏အလုပ်. အမြို့မြို့များစွာပစ်လွှတ်မှာရရှိနိုင်ပါ, တစ်ဦးအသုံးဝင်သောထိတွေ့ - သင်အော့ဖ်လိုင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်ကိုမြေပုံနှင့်အတူ.
အများစုက Mac အသုံးပြုသူများခဏလကွောငျးစာပို့ရဲ့ slick desktop ကိုအီးမေးလ်က software ကိုအကြောင်းသိ. အခုတော့ iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးဗားရှင်းတယ်င်. ဒါဟာအများအပြားလူကြိုက်များအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်, သင့်ရဲ့ inbox ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအရှိန်မြှင့်ရန် features တွေအများအပြားရှိနေပါတယ်, နှင့်ပင်တစ်သပ်သပ်ရပ်ရပ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ app ကိုရှိပါတယ်.
ဒီအံ့သြဖွယ်သားသမီးရဲ့ app ကို iOS ကိုအပေါ်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အထွက်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အန်းဒရွိုက်မှအသစ်ဖြစ်၏. ဒါဟာ touchscreen များအတွက်ဒီဇိုင်းတခုအပြန်အလှန်အက္ခရာင်, သူတို့အက္ခရာများမှတဆင့်သူတို့၏လမ်းကိုအသာပုတ်နဲ့ပွတ်ဆွဲအဖြစ် animations တွေကိုသားသမီးတို့အဘို့စကားသည်သရုပ်ဖော်နှင့်အတူ.
အခြား app belatedly Android ကိုမှအပေါ်လမ်းအောင်, ဒီပေမယ့ဝန်ဆောင်မှု Kickstarter ကပိုငျဆိုငျ. ဒါဟာပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကြိုးစားနေအသစ်စီမံကိန်းများကို browse ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းဖွင့်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မိတ်ဆွေများကျောထောက်နောက်ခံဘာကိုမွငျလြှငျ.
အဲဒီမှာ apps များနှင့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် - မကြာခဏ apps များနှင့်အတူ gadgets - သင့်ခြေလှမ်းများခြေရာခံနှင့်ကူညီမှုအတွက်သင်ပိုမိုတက်ကြွစွာရ. Movesum တစ်စမတ်လှည့်ကွက်ဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့လမ်းလျှောက်မီးရှို့ပစ်လိုက်ပါတယ်မည်မျှကယ်လိုရီခြင်း, နှင့်သင်၏နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်သင့်အားအားပေးအားမြှောက်.
Apple ကမှတစ်ဦးကအသစ်စက်စက်ဂီတပလီကေးရှင်း, ဒါပေမယ့်သီချင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်မယ့်အစားသူတို့ကိုနားထောင်ပြီးများအတွက်. အားလုံးအဆင့်ဆင့်၏တေးရေးဆရာရည်ရွယ်, ဒါကြောင့်သင်စံချိန်သီချင်းတွေကိုသို့မဟုတ်အတိုစိတ်ကူးများကူညီပေးသ, တစ်ဦးကို virtual ဒရမ်သမားနဲ့ bass သမား add; နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ကလစ်များ tag; ထို့နောက်သူတို့ကိုတင်ပို့သို့မဟုတ်ဝေမျှ.
တခါ: တစ်နေ့လျှင် ONE MATCH
Tinder ချိန်းတွေ့ဘို့မြို့ထဲတွင်သာ app ကိုမဖြစ်. ပြီးတာနဲ့ရဲ့ schtick ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်တဦးတည်းယှဉ်ပြိုင်ကစားအကြံပြုကြောင်း: သငျသညျကိုသာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုနိုင်, လူ့အောင်သွယ်၏ဂတိနှင့်အတူအစားထက်ကိုယ့်အထဲကကူညီပေးနေ algorithms.
"တစျခုတစျနေ့" ကိုရှင်းလင်းစွာဒီလတစ်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီ app ဖြစ်တဲ့ Warner တေးဂီတ Group မှကြွလာ, တိုင်းသစ်တစ်ခုဂီတသီချင်းစာရင်းကိုပေးပို့ 24 နာရီ. သင်ကသုံးစွဲဖို့တစ်ဦးကိုပေးဆောင် Spotify စာရင်းပေးသွင်းထားသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အင်္ဂါရပ်မှဖြစ်တဲ့ Warner ရဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးမျှော်လင့်ထား.
MILLIE MAROTTA'S Colours Adventures
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်လည်းစာအုပ်တွေများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုသင့်ဆိတ်သငယ်ကိုရရှိသွားတဲ့လျှင်ယခုမကြည့်ပါ: ဒီက iPad ဖို့စိတ်ကူးကြာ. သငျသညျ coloring နေသောရုပ်ပုံများကိုလှပတဲ့များမှာ, သော်လည်း: သရုပ်ဖော် Millie ရဲ့လူကြိုက်များစာအုပ်များ၏လုပျငနျးကနေသဘာဝပုံရိပ်တွေ. အခြား app များကပြုပါ, ဒါပေမဲ့ဒီကိုမှန်ကန်အဖြစ်လည်းကဲ့သို့အများဆုံးခံစားရ.
ဒါဟာ Microsoft ကမှာအားလုံးအလုပ်မဟုတ်ဘူး: နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့စမ်းသပ် apps များအဖွဲ့ကသငျသညျနိုးထရန်အဘို့အအသစ်တစ်ခုလမ်းရှိပါတယ်. app ကိုဖွင့်နှိုးစက်နာရီပိတ်ရန်, သငျသညျ "တု" တစ်ခုခုရန်ရှိသည်: တယောထားသောစာပိုဒ်တိုများဟူမူကားတစ်ဦးအခြို့သောမကျြနှာကိုဆွဲထဲကနေ. ရီစရာ? အနည်းငယ်, ဒါပေမယ့်သင်နိုးထပါဘူး.
– GAME အက်ပ်များ –
တစ်ဦး "ထိုးထွင်းမလုပ်လို RPG" အဖြစ်၎င်း၏ဖော်ပြချက် Minecraft သင်သတိပေးစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ Crashlands တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်. တကျွန်းတနိုင်ငံသားဂြိုဟ်ပေါ်တွင်လေယာဉ်ပျက်ကျ-ဆင်းသက်ပြီးနောက်, သငျသညျ tools တွေကိုအဘို့အ forage ရန်ရှိသည်, စစ်တိုက်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်တစ်ဦးချုပ်ကိုင်ပုံပြင်ဖုံးကွယ်နေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်. တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အားရစရာ.
သငျသညျ puzzlers တူပေမယ့်ပွဲစဉ်သုံး "Saga" ဖော်မြူလာ၏ပင်ပန်းတယ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, နှစ်ဆ Inc မှတျကိုဖယျရှားဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာမျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာအရက်ဆိုင်ဖွင့်ဖြည့်စွက်ရန်သင်သည်သင်၏လက်ညှိုးနှင့်ရောင်စုံရင်ပြင်၏လိုင်းများ tracing ရှုမြင်, ပို. ပို. ခက်ခဲ "ရွေ့လျား" ကန့်သတ်ဆန့်ကျင်. မူရင်း, အလွန်စွဲလမ်း.
THE WESTPORT လွတ်လပ်ရေး
Android မှာ / iOS ကို
စာတမ်းများ, ဆုံးစဉျးစားစရာမိုဘိုင်းဂိမ်းထဲကတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ ကျေးဇူးပြု., နှင့်ဤတူညီသောအထည်ကနေဖြတ်သည်. သငျသညျအာဏာရှင်စနစ်သို့လျှောက "စစ်ပြီး" တိုင်းပြည်တစ်သတင်းစာတည်းဖြတ်, သငျတို့သမထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်ဆင်ဆာပုံပြင်များလဲလှယ်ရန်ရှိသည်. သို့မဟုတ်, သငျသညျသတ္တိဆိုရင်, တယောက်တည်းသူတို့ကိုထားခဲ့ ...
သင် Spectrum အိမ်မှာကွန်ပျူတာများ၏ခေတ်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့လျှင်, Downwell ရဲ့ retro ဂရပ်ဖစ်လွမ်းဆွတ်မှု၏ဝဒေနာဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်. သို့သော်လျှင်ပင်မဟုတ်, သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဒါပေမယ့်လိမ္မာပါးနပ်ကျသွား-Down-a-ကောင်းစွာဂိမ်းမကြာမီသင်သည်အပေါ်တစ်ဦးစာလုံးပေါင်းချမည်. သငျသညျ play အဖြစ် power-ups အဓိကအခန်းကဏ္ဍ, သေဆုံးနှင့်ထပ်.
ပေါက်ပေါက်ကွဲ Kickstarter ကအပေါ် $ 8.8m ၏တေးသွားကိုဖို့ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ဇာတ်ဆောင် card ကိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါကအောင်မြင်မှုဟာသူ့ရဲ့ဖန်တီးသူတစ်ဦးကမိုဘိုင်းဂိမ်းသို့လှည့်ကူညီပေးခဲ့, ကိုယ့်ပျော်စရာအဖြစ်ရာဖြစ်ပါသည်. သတိပေးခဲ့သည်ခြင်းကိုခံရ: သင်ပင်ကစားရန်သူတို့ရဲ့အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်အတူနှစ်ခုကစားသမားတွေလိုအပ်ပါတယ်.
Mana ၏ Adventures
အ Final Fantasy console ကို RPGs ၏ပရိသတ်များကသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အပေါ်စီးရီးအတွက်အဟောင်းတွေဂိမ်းကစားရန်အခွင့်အလမ်းတွေကိုများများခဲ့ကြ. ပိုပြီးပေါ့ပေါ့ကစားသမားမသိစေခြင်းငှါဂိမ်းများ - - Mana ၏ Adventures ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး RPG သမိုင်းတစ်ရောင်စုံအချပ်ကမ်းလှမ်း.
COUNTDOWN: တရားဝင် APP ကို
လူများများကသူတို့ရဲ့ဆိုဖာပေါ် Countdown play - တီဗီဂိမ်းပြပွဲနှင့်အတူမိမိတို့ခေါင်းပေါ်အတွက်တလျှောက်ကစားနေဖြင့်. အခုတော့တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်: ဒီအရာရှိတဦးကမိုဘိုင်းဂိမ်း, အက္ခရာနဲ့နံပါတ်ကျည်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် conundrums ဖြေရှင်းဖို့နှင့်အတူ. ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, တစ်ဦးနှစ်ဦး-ကစားသမား-on-one-device ကို mode ကိုအပါအဝင်.
သငျသညျပြီးသားအရွယ်ရောက်ရေကူးရဲ့ရစ်ခ်နှင့် Morty ကာတွန်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေလျှင်သင်ဒီဂိမ်းထဲကအများဆုံးရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့ပျော်စရာင်. Unashamedly Pokemon နေဖြင့်မှုတ်သွင်း, သင် Morty ဇာတ်ကောင်၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းဖမ်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ကြောင့်ဟာသနှင့်အတူထုပ်ပိုးင်.
တစ်ဦးပလက်ဖောင်းဂိမ်းအပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုလှည့်ကွက် Want? ဒါဟာကိုထောက်ပံ့ပေး: စက်ဝိုင်းတစ်ခုစီးရီးပတ်လည်မှာသင့်ရဲ့သေးငယ်တဲ့တုတ်-ဇာတ်ကောင်ပြေးနဲ့ခုန်, ရန်သူများကိုရှောင်ရှားနေစဉ်အလယ်ဗဟိုသို့သင့်ရဲ့လမ်းအလုပ်လုပ်. ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာခက်ခဲတဲ့ပုံရသည်, ဒါပေမဲ့သင်ရစ်သမ်ဖို့အသုံးပြုရအဖြစ်, တကဆွဲဆောင်မှုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာ.
မိုဘိုင်းအပေါ်တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အမျိုးအစားဖြစ်လာင်သောမြို့တည်ဆောက်ရေးနည်းဗျူဟာတခုတခုအပေါ်မှာတီထွင်အသစ်ယူ. ဒီဂိမ်း, နာမည်ကျော်ဂိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Atari ကနေ, အ LGBTQ ကျင်းပ (လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, Transgender များနှင့် queer) အသိုင်းအဝိုင်း, ၎င်း၏ Centrepoint အဖြစ်မာနပွဲတော်များနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ.
27591	7 Android မှာ, App များ, လတစ်လရဲ့ App များ, အပိုဒ်, အင်္ဂါရပ်များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ, IOS ကို, လေ့လာသူ Tech မှလစဉ်, စမတ်ဖုန်း, စတူးဝပ်သောင်, နည်းပညာ, အဆိုပါ Observer
← လည်းအတော်များများတွင် neuron အသိုလှောင်သည့်ဥစ္စာကိုလု ယူ.4တကယ်တော့ Fly ဒါကရီးရဲလ်ပျံကားများ [VIDEO] →